China High Toughness Arch Type A Type V Type W Type M Type MRubber Fender Strip fekitori uye vanotengesa | Haohang
Yakakwira Kuomesa Arch Type A Type V Type W Type M Rudzi Rubber Fender Strip
Yakakwenenzverwa chimwe chidimbu kuumbwa kwehupenyu hwakareba hwebasa Kwakanakisa shear kuramba Low hull kuonana nekumanikidza Strong kugadzirisa kurongedza, nekukurumidza uye nyore kumisikidza Asiri-akareba marefu, Energy Index uye magumo maficha aripo Yakakwira simba rekutora Yakaderera kuita simba.
M Rudzi Rubber Fender W Type vanodzivirira Marine Offshore Rubber Vanyoreri
M Type Rubber Fenders anoshandiswa zvakanyanya pauta kana kumashure kwechikepe kana pamakona emadhoko kana maponto. Iyo M chimiro yeiyi fender inopa kuchinjika uye saka inogona nyore nyore kutevera contour yeuta kana kumashure. Iyi mhando ye fender ine yakafara uye inoshanduka kusangana pamusoro. Iyo grooves iri pamusoro inopa kuwedzera kubata uye makumbo matatu anochinjika kuti ave nechokwadi chekutaurirana kwakanaka uye kwakasimba kubatana. M vanokamhina vanogona kuiswa pane diki nharaunda uye ivo vakareruka kupfuura W fenders. Makomba matatu anokwira muM f fenders anofambisa nyore uye nemazvo kuisirwa.
M Type Rubber Fenders anoshandiswa zvakare kusunda. Vanopa hukuru hwakatarisana kumeso kumeso kune yakanyanya kudzvanywa huni kumanikidza - inobatsira kana uchishanda nezvipfava zvine hulled ngarava senge matangi nematakura akawandisa. Iyo yakavezwa giraidhi inopa yakawedzera kubata uye iyo M Fender inogona kukwirwa zvakapoteredzwa pamatanho akatwasuka uye madiki madiki radii pauta uye kumashure kwedzimba dzekutakura.
M fenders anogadzirwa kubva kune yakasarudzika mhando yerabha. Hurefu kazhinji hahupfuure kupfuura 2000 mm uye ivo vanogadzirwa nenzira yekumanikidza-kuumba. Izvo zvakajairika zviyero zvinochengetwa muchitoro uye saka zvinogona kuunzwa nekukurumidza. M fenders, W vanokanganisa uye maKeyhole fenders haachinji.
M fenders zviri nyore kuisa. Kuisa kazhinji kunowanzoitika nerubatsiro rwekugadzirisa mapini kuburikidza nematanho matatu akazara. M fenders anowanikwa muhurefu hwakasiyana uye anogona kutemwa pakona. Kana ivo vanorefu vakareba kupfuura mita imwe kuvhurwa kwetambo yekutsigira kunogona kuwedzerwa.
Yakakwenenzverwa chimwe chidimbu kuumbwa kwehupenyu hwakareba hwebasa
Kwakanakisa kuveura kurwisa
Yakadzika huni yekumanikidza kumanikidza
Kurongeka kwekugadzirisa kwakasimba, nekukurumidza uye nyore kuisa
Asina-akareba urefu, Energy Index uye yekupedzisira nhoroondo inowanikwa
Kubata simba kwakanyanya
Yakadzika yekuita simba.
With zvine musoro mamiriro, nyore kuti kuisa uye kugadzira.
Kushanda kweM kana V kana W Type Rubber Fenders
M kana V kana W Type Rubber Fenders anoshandiswa kuchengetedza:
• zvikepe zvechikepe
• magwa okushandira
• zvinopwanya aizi
• kuendesa magwa
• makona e quays
• zvikamu zambuko
Q4. Zvakadii neyako nguva yekuendesa?
A: Tinogona kupa yemahara sampuli kana isu takagadzirira zvikamu mudura, asi vatengi vanofanirwa kubhadhara yekambani cost.kurukuru ndatenda nekuda kwako kunzwisisa.
Pashure: Polyurea Ganda EVA Foam Yakazadza Donut Fender
Zvadaro: Monopile Inoyerera Polyurethane EVA Donut Fender
Tec Zvikepe, Rubber Fender, China Rubber Fender, Mhepo dzeMahombekombe, Ship Mhepo Bhegi, Wakaumbwa Block,